Ingaba uyazazi iimpawu ezi-5 zesifo seswekile? - South Africans with Diabetes
Ingaba uyazazi iimpawu ezi-5 zesifo seswekile?
Umntu omnye kwaba-2 onesifo seswekile akafumaneki eMzantsi Afrika. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba wabelane ngeempawu ezi-5 zesifo seswekile nawo wonke umntu omaziyo. Yile nto intshukumo yazi isifo seswekile imalunga nayo: singayitshintsha inombolo yokuchonga ngokwabelana ngezi mpawu nosapho kunye nabahlobo, kwaye sibacela ukuba babelane ngazo. Sijoyine kubemi boMzantsi Afrika abaneswekile ukuze ufumane ulwazi malunga nokuba ungaphila njani kakuhle neswekile.
Iimpawu ezi-5 zeswekile
Ukufuna ukuchama kakhulu
Ukutshekishwa iswekile egazini lakho kuyakhawuleza kwaye kulula – iziphumo zikhawuleza kwaye zithatha kuphela imizuzu emi-5. Nceda ukhuthaze wonke umntu omaziyo ukuba ahlolwe iswekile yegazi minyaka le!
Ingaba unayo nayiphi na imibuzo malunga neswekile? Jonga icandelo lethu loLwazi lweSwekile kwaye usebenzise ibha yokukhangela ukuze ufumane iimpendulo. Usenombuzo? Sithumelele i-imeyile kwaye siza kufumana iingcali zethu zeswekile ukuze siziphendule.